တစ်တီတူး - ဝီကီပီးဒီးယား
တစ်တီတူး (Vanellus indicus) သည် ကယ်ရာဒရိုင်အီဒီး မျိုးရင်းတွင်ပါဝင်‌သော ငှက်ဖြစ်သည်။ ထိုငှက်ကို သတ္တဗေဒ(ပါဏဗေဒ‎) အလိုအားဖြင့် လိုဗီဗင်နဲလပ် အင်ဒီကပ် ဟု‌ခေါ်သည်။ တစ်တီတူးဟု‌ခေါ်ခြင်းမှာ ထိုငှက်၏ အော်သံကို အစွဲပြု၍ ‌ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အလျား ၁၃ လက်မ ခန့်ရှိသည်။ ခါထက် ကိုယ်ထည်အနည်းငယ် ပို၍ကြီး၏။ ‌ခြေတံလည်တံများသည်လည်း ခါ၏ ‌ခြေတံလက်တံများထက် ရှည်သည်။
တစ်တီတူးသည် လူသိများသည်။ တစ်တီတူး၏ ကိုယ်အ‌ပေါ်ပိုင်းတွင် အညို‌ရောင်ရှိ၍ ‌အောက်ဘက်တွင် အဖြူ‌ရောင် ရှိသည်။ မျက်နှာ၊ ရင်အုပ်နှင့် ဦး‌ခေါင်းတို့သည် မည်းနက် သည်။ တစ်တီတူး အဖို၊ အမတို့တွင် မျက်လုံးတစ်ဘက်စီ၏ အ‌ပေါ်နှင့် ‌ရှေ့ဘက်၌ ကြက်‌သွေး‌ရောင်အသားပိုတစ်ခုစီရှိသည်။ ငှက်ငယ်ဦး‌ခေါင်းရှိ အ‌မွှေးများသည် အဖျားတွင် ညို‌ရောင်သန်း ‌နေသည်။ ‌မေးနှင့်စလုတ်တို့ဖြူသည်။
တစ်တီတူးသည် အ‌နှောက်အယှက်ခံရလျှင် ပျံဝဲ၍ ထပ်တလဲလဲ ကျယ်‌လောင်စူးရှစွာ ‌အော်‌နေတတ်သည်။ တစ်တီတူးကို သဲ‌သောင်ပြင်၌လည်းကောင်း၊ စိုက်ပျိုးခင်းနှင့် ‌သွေ့‌ခြောက်‌သော ကုန်းမြင့်ရှိ ‌မြေလပ်များ၌လည်းကောင်းတွေ့ရသည်။ ထို့ပြင် ထုံးအိုင်‌ဒေသများ တွင်လည်း ‌တွေ့နိုင်သည်။ ဒီ‌ရေ အတက်အကျရှိ‌သော ‌ဒေသများတွင်မူ တစ်တီတူးကိုမ‌တွေ့ရတတ်‌ချေ။ ရန်သူ အနီးအနား၌ ရှိသည်ဟု မယုံသင်္ကာဖြစ်‌သောအခါ ‌ခေါင်းညိတ်‌လေ့ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့ ‌ခေါင်းညိတ်သည့်အ‌လေ့မှာ တစ်တီတူးငှက်၏ ထူးခြားချက်ပင်ဖြစ်သည်။
တစ်တီတူးသည် ‌မြေကြီး‌ပေါ်၌ ခုန်ဆွခုန်ဆွ သွားလာကာ ပိုးမွှား‌ကောင်နှင့် ခရုမျိုးများကို ရှာ‌ဖွေစား‌သောက်သည်။ ထို ငှက်သည် ‌နေ့အချိန်၌သာမဟုတ်၊ ညအချိန်၌လည်း ပျံသန်း ‌အော်မြည်‌နေတတ်သည်။ ပျံသန်းသည့်အခါတွင် ‌တောင်ပံများကို မှန်မှန်ရိုက်၍ ‌နှေး‌နှေးပျံ‌လေ့ရှိသည်။ ခဏပျံသန်းပြီး‌နောက် ‌မြေကြီးသို့ တစ်ဖန် သက်ဆင်းပြီးလျှင် အနည်းငယ် ခုန်ဆွခုန်ဆွ သွား‌လေ့ရှိသည်။ ထိတ်လန့်‌သောအခါတွင် လျင်မြန်စွာ ပျံသန်းနိုင်သည့်ပြင် ပျံသန်း‌နေခိုက်၌ ကိုယ်ကိုလည်း ကျင်လည်စွာ လှည့်ပတ်၍ လှုပ်ရှားနိုင်သည်။
မတ်လနှင့် ဩဂုတ်လတို့တွင် ဥအု‌လေ့ရှိသည်။ ‌မြေကြီးပေါ်၌ သဘာဝအ‌လျောက် ချိုင့်‌နေသည့်‌နေရာများတွင် အသိုက်လုပ်တတ်သည်။ မိုးဥတုကရေဝပ်ခဲ့‌သော ချိုင့်ခွက်များ ၌၎င်း၊ ကျွဲနွားတို့၏ ‌ခြေရာခွက်၌၎င်း အသိုက်လုပ်‌လေ့ရှိသည်။ ရေခြောက်‌နေ‌သော ကန်များ၌လည်း တစ်တီတူးအသိုက်များကို ‌တွေ့ရတတ်သည်။ အသိုက်တစ်ခုတွင် ဥ ၄ ဥ ‌တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ ငှက်ဥ၌ အညို‌ရောင်တွင် အမည်းကွက်‌လေးများရှိသည်။
ထိုဥအ‌ရောင်နှင့် ‌ပေါက်စငှက်ငယ်က‌လေးများ၏ အ‌ရောင်သည် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအ‌ရောင်နှင့် ဆင်တူလှသဖြင့် ယင်းတို့ကို ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ခွဲခြား၍ သိရန်ခဲယဉ်းသည်။ ငှက်ဖိုနှင့်ငှက်မများသည် သူတို့၏ ငှက်ငယ်က‌လေးများကို အလွန်ဝီရိယကြီးစွာ စောင့်‌ရှောက်ကြသည်။ အကယ်၍ သူတို့၏ အသိုက်အနီးသို့ အခြားတိရစ္ဆာန်များ ကျူး‌ကျော်လာလျှင် ပြင်းထန်စွာခုခံတတ် ကြသည်။
တစ်တီတူး သည် ရှေးဆိုရိုးဖြစ်သော မသူတော်ခုနစ်ပါး ဟုခေါ်သည့် တိရစ္ဆာန် ခုနစ်မျိုးတွင် အပါအဝင်ဖြစ်သည်။
↑ BirdLife International. (2016). Vanellus indicus. The IUCN Red List of Threatened Species 2016. doi:10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22694013A89569039.en
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တစ်တီတူး&oldid=712123" မှ ရယူရန်
အနောက်အာရှတွင် တွေ့ရှိရသော ငှက်များ
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၂၁:၄၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။